Football Khabar » बार्सिलोनाको आकाशबाट युनाइटेडले ग्रीजम्यानलाई ‘हाईज्याक’ गर्ने !
बार्सिलोनाको आकाशबाट युनाइटेडले ग्रीजम्यानलाई ‘हाईज्याक’ गर्ने !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले गत समरबाटै फ्रेन्च स्टार एन्टोनी ग्रीजम्यान भित्र्याउन चाहेको छ । यसपटक भने बार्सिलोनाले दृश्यमा देखिने गरी नै २८ वर्षीय विश्वकपविजेता खेलाडीलाई क्याम्प नोउ उतार्न प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्ला ४८ घन्टामा बार्सिलोनाले ग्रीजम्यान भित्र्याउने करिब पक्काजस्तै भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका बेला इंग्लिस मिडियाले भने म्यानचेस्टर युनाइटेडले ग्रीजम्यानलाई ‘हाईज्याक’ शैलीमा भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको खबर छापेका छन् ।
युनाइटेडले ग्रीजम्यानका लागि १२० मिलियन पाउन्डसम्म खर्चिन तयार छ । यो बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानका लागि तिर्न तयार रकमभन्दा बढी हो । बार्सिलोनाले यसअघि ग्रीजम्यानका लागि एथ्लेटिको मड्रिडलाई १२० मिलियन युरोसम्म तिर्न तयार थियो । तर, अब युनाइटेडले बार्सिलोनालाई उछिन्दै १३४ मिलियन युरोसम्म खर्चिन तयार भएपछि बार्सिलोनालाई झट्का लाग्ने देखिएको छ ।
युनाइटेडले ग्रीजम्यानका लागि बार्सिलोनाले तिर्न तयार मूल्यभन्दा बढी रकम खर्चिने भएको छ । ‘द मिरर’, ‘मिरर युके’ ‘द सन’लगायत अधिकांश इंग्लिस मिडियाले युनाइटेड ग्रीजम्यान भित्र्याउने धेरै नजिक पुगेको खबर छापेका छन् । बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानको विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेका बेला युनाइटेडले त्यसको फाइदा उठाउँदै स्टार फरवार्ड टोलीमा भित्र्याउन चाहेको छ ।
यो बताइन्छ कि, बार्सिलोनाले आफ्नो नाममा नेइमारको सरुवालाई जोडेर प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै ग्रीजम्यान बार्सिलोनाको तरिकासँग असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समय बार्सिलोनाले नेइमार फर्काउने योजनलााई मुख्य प्राथमिकतामा राखेसँगै ग्रीजम्यान बार्सिलोनाको प्राथमिकताबाट बाहिरिएको बताइन्छ । यो कुरा ग्रीजम्यानलाई सही लागेको छैन ।
अर्को समस्या भनेको बार्सिलोनाले ग्रीजम्यान भित्र्याएपछि टोलीमा उनले पाउने भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा दिन नसक्नु रहेको बताइन्छ । ग्रीजम्यान क्याम्प नोउ पुगेपछि कप्तान मेस्सीपछि दोस्रो प्रमुख भूमिका लिन चाहन्छन् भने तलब–सुविधा पनि सोहीअनुसार चाहन्छन् । तर, यसमा बार्सिलोना तयार देखिँदैन ।
यसैबेला बार्सिलोनाले नेइमार फर्काउने योजनालाई प्राथमकितामा राखेपछि ग्रीजम्यानले पनि क्याम्प नोउमा आफ्नो भविष्य झन् अन्योलमा पर्ने ठानेर उनी बार्सिलोनाको विकल्पमा तयार हुने देखिन्छ । यस्तो रिपोर्ट फ्रेन्च मिडियाले ‘टेलिफुट’ले छापेको छ । यदि बार्सिलोनाले नेइमार पनि भित्र्याए ग्रीजम्यान मेस्सी र नेइमारपछिको स्थानमा रहने गरी क्याम्प नोउ जान तयार नहुने बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति १६ असार २०७६, सोमबार १०:१६